Warka - Waa maxay sababta qiiqa ku jira koronto dhaliyaha dejisan?
Noocyada dhaliyaha naaftada ayaa laga yaabaa inay qiiqa sii daayaan inta ay shaqeynayaan. Midabada kala duwan ee qiiqu waxay u taagan yihiin cilado kala duwan. Haddii qiiqa dejiyaha naaftada aan waqti lagu qaban, waxay sababi kartaa fashilaad go'an soo saaraha naaftada ama xitaa inuu ku guuldareysto inuu bilaabo. Waa kuwan qaar ka mid ah xaaladaha qiiqa.
1.Qiiq madoow oo ka dhasha koronto dhaliyaha
Aaladda dhaliyaha naaftada ee loo dejiyey geedi socodka hawlgalka, shidaalka naaftada si buuxda looma gubin, samaynta kaarboonka madow waa laga reebay waxay horseedi doontaa koronto-dhaliye naaftada ah oo qarka madow loo sii daayo. Waxaa jira sababo dhowr ah oo tan:
Ring 1 ring giraanta bistoolada, xirmidda xargaha silsiladda;
（2） cirbadaha si fiican uma shaqeynayo;
（3） qaabka isbadalka qolka gubida;
（4 Si aan sax ahayn loo waafajiyo Xagalka saliidda la sii siinayo;
（5） saliida la siinayo waa mid aad u weyn.
2. Matoor dhaliyaha ayaa dhigay qiiq buluug ah
Qiiqa buluugga ah ee koronto dhaliyaha naaftada ah wuxuu la xiriiraa saliidda saliidda, kaas oo gala dhululubada una uumi baxa saliidda iyo gaaska buluuga ah. Qiiqa buluuga ah waxaa lagu sii daayaa gaaska qiiqa. Waxaa jira sababo dhowr ah oo tan:
（1 filter Miiraha hawada waa la xannibay, qaadashada hawadu ma ahan mid siman ama heerka saliidda ee weelka saliidda aad ayuu u sarreeyaa;
2） Inta lagu jiro hawlgalka dejiyaha naaftada, qaddarka saliidda ku jirta digsiga saliidda aad buu u badan yahay ama aad ayuu u yar yahay;
（3 ring Giraanta bistoolada, bistoolada, qalabka silsiladdu waa da ';
（4） suufka u dhow silsiladda ilaa madaxa silsiladda ku jirta saliidda jirka oo gubatay;
Intaas waxaa sii dheer, haddii ay tahay mashiin naafto ah oo cusub oo qalabaysan, marxaladda hawlgalka bilowga ah, waxaa ku jira matoor naafto ah oo yar oo khafiif ah oo qiiqa buluugga ah lagu sii daayo waa dhacdo caadi ah.
3.Ga dhaliyaha naaftada wuxuu dejiyaa qiiq cad
Qalabka dhaliyaha naaftada ayaa sii deynaya qiiqa cad Guud ahaan, matoorka naaftada wuxuu dejiyaa qiiqa cad ee tuubada qiiqa marka ay bilaabayaan ama ay ku jiraan xaalad qabow. Sababtoo ah heerkulka hoose ee silsiladda naaftada iyo sameynta uumiga saliidda iyo gaaska. Tani waa run gaar ahaan xilliga jiilaalka. Haddii dhuumaha qiiqa ay wali sii daayaan qiiq cad markuu mashiinku kulul yahay, waxaa lagu xukumay inuu yahay cilad mashiin naafto ah. Waxaa jira sababo dhowr ah oo tan:
（1） Mashiinka dhululubadu wuu dillaacay ama suufka silsiladda ayaa waxyeello gaadhay, oo biyaha qaboojinta ayaa galaya dhululubada, qiiqu wuxuu sameeyaa ceeryaamo biyo ama uumis;
（2 ization atomization cirbadeynta ma fiicna, waxaa jira ifafaale saliid ka daadanaya;
（3） Xagalka hore ee soo-saarka saliidda aad ayuu u yar yahay;
（4 the shidaalka waxaa ku jira biyo iyo hawo;
5 pressure Cadaadiska duritaanka aad ayuu u hooseeyaa, cirbadaha cirbadda ayaa saliid si daran u daadiya, ama cadaadiska cirbadaha ayaa aad u hooseeya.